Al-shabaab oo la wareegay doogeeno ka tirsan G/Bari. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab ay la wareegeen deegaan lagu magacaabo Af Urur oo aan ka fogeenka Buuraha Gal-gala ee Puntland.
Dagaalamayaasha la wareegay deegaanka Af Urur ayaa la sheegayaa in ay yihiin kuwoo aad u hubeysay, sida ay ku waramayaan dadka deegaanka.
Deegaanka Af Urur ayaa horay waxaa u joogay Ciidamo ka tirsan kuwa Puntland laakiin maalhii dambe ayey halkaasi faarujiyeen inkastoo aan la ogeyn sababta ka dambeysa in Ciidamada ay baneeyaan deegaankaasi.
Balse wararka hoose ee soo baxaya ayaa sheegaya in bixitaanka Ciidamada uu salka ku haaya kooxda Al-shabaab oo deegaanka Af Urur iyo deegaano kalaba soo buux dhaafiyay, taasina oo keentay in Ciidamada ay baneeyeen saldhigyadii halkaasi ay ku la haayeen.
Majiraan faafaahin intaas dhaafsiisan oo laga helayo wararkaas ku aadan deegaanka Af Urur oo aan ka fogeen Buuraha Gal-gala ee Puntland oo maanta kooxda Al-shabaab ay la wareegeen.